नेपाल आइडलमा सागर आलेले ‘मेरो नेपाल’ गाएपछि जजले भने हिरा होईन कोहिनुर हौ भिडियो « Naya Bato
नेपाल आइडलमा सागर आलेले ‘मेरो नेपाल’ गाएपछि जजले भने हिरा होईन कोहिनुर हौ भिडियो
नयाँबाटो, सागर आले मगरसानै देखि संगितमा रुचि राखे पनि १४ बर्षको उमेर देखि गायन क्षेत्रमा लाग्नुभएको हो । एकदमै कुसल गायक स्वरका धनी सागर अहिलेसम्म चितवन आईडल टप ८, नेपाली तारामा टप २० को सेलेक्शन र बिग आइकनमा पहिलो रनर अप भएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । भने चारैतिर बाट राम्रो प्रतिक्रिया माया र भोट पाएका सागर आले मगर अहिले नेपाल आईडल को उत्कृष्ट ४ मा पर्न सफल हुनुभएको छ ।
नेपाल आइडलमा सागर आलेको हजार आँखा हेर्ने:
सागर आले सबै खाले गीत गाउन सक्ने मेधावी व्यक्ति हुन । उनि क्लासिकल, पप, रक तथा लोक विधाको गीत समेत गाउन माहिर छन् । गाउनुको अलावा मादल बजाउन र नाँच्नमा पनि उत्तिकै सिपालु आले पढाइमा पनि अब्बल नै छन् !
पहिलो पटक २०७० मा चितवन आइडलमा भिडेका सागरले टप ८ मा चित्त बुझाएका थिए ! सागर आले र उनका दाई साजन आले नेपालि तारा सिजन ३ मा वुटवल पुगेर अडिसन दिए र दुई भाई नै पास भएका थिए अन्तत सागर नेपालि तारा टप २० सेकेक्शन बाट बाहिरिएका थिए !
अचम्मको कुरा सागरले अहिले सम्म म्युजिक सिकेका छैनन तर कुनैपनि विधाका गित मज्जाले गाउन सक्ने सामर्थ्य सागर सँग छ ! निम्न परिवारमा हुर्केका सागरको स्वभाव सानैदेखि चन्चले र सबै सँग भिज्न सक्ने छ उनि बच्चा युवा र बुढाबुढी सबैसँग मज्जैले भिज्न सक्छन !
सागर आलेको परिवारमा सागर आले र उनका दाई साजन आले गाउनमा बराबर नै छन् तर अरु भाईहरु र आमाबुवामाहरुमा भने त्यो कला थिएन !
सागर नेपाल आइडलको Top ४ मा पुगेपछि देशैभरी र विदेश तिर पनि हजारौं संगीत प्रेमी युवाहरु उत्साहित छन् । हरेक तह र तप्काबाट सागरलाई साथ र सहयोग मिलिरहेको छ । पटिहानी निवासी नेपाल आईडलको टप ३ मा प्रतिस्पर्धा गरि रहेका सागर आले टप १२ देखि दर्शकको भोटिङको आधारमा छनोट हुदै आएका सबैमध्येका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी अहिलेसम्म एक पटक मात्र डेन्जर जोनमा परेका छन ।
नेपाल आइडलमा सागर आलेका हरेक प्रस्तुतिहरु एकदमै दमदार धमाका छन् । सागर आलेलाई अझै अगाडी बढाउन र नेपालको पहिलो नेपाल आइडल बनाउन जनताको भोट नै निर्णायक बन्छ त्यसैले उनलाई भोट गर्न मोबाईलको म्यासेज बक्समा गई १३ टाईप गरि ३५२२५ मा पठाउन पर्नेछ । यस्तै विदेशमा बस्ने दर्शकहरुले नेपाल आईडलको मोबाईल एप्लीकेशन डाउनलोड गरेर सागरलाई भोट गर्न सकिनेछ । माथि प्रस्तुत सामग्री नयाँबाटो डटकमले सागर आलेको पारिवारिक स्रोत बाट तयार पारेको हो ! मनपरे सेयर पनि गर्नुहोला धन्यवाद
आजको प्रस्तुति हेर्नुहोस भिडियोमा: